कहाँ–कहाँ चिप्लिए रबिन्द्र अधिकारी ? | My News Nepal
कहाँ–कहाँ चिप्लिए रबिन्द्र अधिकारी ?
काठमाडौं । दुई महिना अगाडि पूर्व एमाले निकटका पत्रकारलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राखेको रात्रिभोजमा दुई समूहबीच झण्डै कुटाकुट भयो । आफ्नो एकसय दिनेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि अधिकारीले दरबारमार्गको एक होटेलमा मदिरासहितको रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यो भोजमा मदिराले मात्तिएका दुई व्यक्तिवीच भनाभन भएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई मन्त्री अधिकारी आफैले ह्याण्डल गरेका थिए ।
यी र यस्तै खालका विवादमा आइरहने मन्त्री अधिकारी फेरि अर्को विवादमा परेका छन् । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा बाइट लिन पुगेका एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारको माइक खोस्न खोजेर उनले अहंहिष्णुता देखाएका छन् ।
अर्बौं पर्ने विमान खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा प्रश्न सोध्ने पत्रकारको दायित्व र कर्तव्य हो । जवाफ दिनुपर्ने दायित्व मन्त्री अधिकारीको हुन्छ । तर, मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिनुको साटो पत्रकारको माइक खोस्न खोजे । उनको त्यो हर्कतले मन्त्री अधिकारी कुन स्तरसम्म तल झर्छन् भन्ने देखाएको छ ।
संसदको लेखा समितिको सदस्य र विकास समितिको सभापति भएका बेला अधिकारीको नाम विभिन्न अनियमिततामा जोडिएर आएका थिए । अधिकारीले नै विकास समितिको सभापति भएका बेला एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरेर निर्णय पनि गरेका थिए । ६५ अर्व लाभकर नतिर्ने एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न उनले आफ्ना कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयको सबैले विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नजरमा मन्त्री अधिकारी परेका छन् । राम्रो काम गरेर भन्दा पनि अधिकारीलाई विवादमा आइरहने मन्त्रीका रुपमा ओलीले चिन्न थालेका छन् । ओलीको सचिवालयका एकजना सल्लाहकारले भने, ‘रविन्द्र अधिकारीज्यू विवादमा आइरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यीले नोटिस गर्नुभएको छ ।’ (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)